Vokatry ny fikapohana zaza | Bezzia
Na dia tsy nasiana totohondry aza ny fikapohana zaza, ny marina dia ny sazy ara-batana dia zavatra tokony hialana ary tsy hitadiavana. Ny fikapohana ankizy dia hita fa misy vokany lehibe, misy fiatraikany ratsy amin'ny fivoaran'ny zaza.
Tsy tsara ny manantona ilay tehamaina malaza rehefa manitsy fihetsika sasany ananan'ny zaza. Ny fahasimbana ara-pientanam-po sy ara-tsaina dia tena zava-dehibe ary mety hisy vokany any aoriana.
Ny vokatry ny fikapohana ny ankizy
Ny mikapoka ny ankizy dia fihetsika maharikoriko ho an'ny ray aman-dreny, izay hanana andian-vokany izay mendrika asongadina:
Ny fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia zava-dehibe sy lehibe ho an'ny fianakaviana rehetra. Raha misafidy ny hikapoka ny zaza ianao isaky ny tsy tadiavina ny fihetsiny, dia ara-dalàna ny manomboka manalavitra ny ray aman-dreniny ny zaza ary mahita ny fahatokisan-tena na ny fifandraisana amin'izy ireo.
Marina tokoa fa miteraka herisetra bebe kokoa ny herisetra. Raha tototry ny ray aman-dreniny ny zanaka dia hahatsapa fa ara-dalàna ny mamely ankizy hafa. Mampiseho izany ny angon-drakitra ary ireo ankizy izay nahazo sazy ara-batana avy amin'ny ray aman-dreniny, manana latsa-bato bebe kokoa izy ireo ho tonga mpampihorohoro.
Ny fikapohana zaza dia manery azy hanaiky sy hanaiky ny baikon'ny ray aman-dreny. Na izany aza, ny zaza rehefa lehibe dia tsy maintsy mahaleo tena sy mahaleo tena amin'ny zavatra ataony. Ny ankizy kely dia tsy maintsy manaraka ny lalàna napetraky ny ray aman-dreny nefa mahalala ny dikan'izy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Ny ray aman-dreny dia tokony ho modely ho an'ny zanany raha ny amin'ny fitomboana sy ny fivelaran'ny olon-dehibe. Tsy ny fahitan'ny ankizy kely fa ny ray aman-dreniny tsy afaka mifehy ny hatezerany na mety ho sosotra izy ireo ary mitolo-batana amin'ny fiovana voalohany izy ireo.
Ny lafiny ara-pientanam-po dia tena zava-dehibe rehefa manabe ny ankizy kely. Raha misafidy ny hikapoka ny zanany ny ray aman-dreny amin'ny fiovana voalohany, dia tsy ho afaka mifehy ny fihetsem-pony amin'ny fotoana rehetra izy ireo ary hanana olana lehibe rehefa mifanerasera amin'ny olon-kafa.
Raha fintinina, tsy tokony hasiana sazy ara-batana rehefa manitsy ny fihetsiky ny zaza. Ny fanabeazana dia tsy maintsy miorina amin'ny soatoavina manan-danja toy ny fanajana na ny fitiavana. Ny zaza iray dia mazoto kokoa mianatra sy mihaino rehefa mahatsapa ny firaiketam-po sy ny fanohanan'ny ray aman-dreniny izy fa tsy rehefa voasazy sy kapoka matetika.
Ny ray aman-dreny dia tsy maintsy manam-paharetana rehefa manabe ny zanany, satria tsy asa mora na tsotra io. Tsy azo atao ny mamela fa amin'ny fotoana voalohany fanovana dia misafidy ny làlana tsotra indrindra ny ray aman-dreny ary manantona ny takolaka hampianarana ny zanany amin'ny fomba mety.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Ampianaro ny ankizy » Inona no vokatry ny famelezana zaza
Fomba handravahana ny efitrano fandraisam-bahiny: torolàlana hitarika anao